Boga ugu Akhriska Badan dalka Eritrea facepook [Eritrean Press] waxaa leh tafatire aanay aqoonin wariyayaasha wax ku qoraa, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Boga ugu Akhriska Badan dalka Eritrea facepook waxaa leh tafatire aanay...
Boga ugu Akhriska Badan dalka Eritrea facepook [Eritrean Press] waxaa leh tafatire aanay aqoonin wariyayaasha wax ku qoraa,
Waa Tififaf tiraha bog caan ka ah facebook-ga waxaana uu ku qoraa wararka ku saabsan dalkiisa oo ah mid ka mid ah waddamada ugu liita caalamkan ee dhankaa xorriyatul qowlka warbaahinta. Hase ahatee xitaa wariyaasha wax ku qora boggiisa aqoon buuxda uma laha qofka uu yahay.
Marka si guud loo eego, ninkan oo magaciisa sabab jirta awgeed loogu soo koobayo J, noloshiisu waa mid la mid ah dadka caadiga ah.
J Waxaa uu leeyahay qoys, shaqo maalinle ah, wuxuuna taageeraa koox ciyaarta kubadda cagta.
Sida laga soo xigtay hay’adda wariyaasha aan xuduuda laheyn, kaliya dalka Kuuriyada waqooyi ayaa Eretariya uga liita dhinaca madaxbanaanida warbahainta.
“Ma jiro qof garanaya ruuxa aan ahay, haddii ay taasi dhici lahayd xilligan waxaan ku jiri lahaa xabsi”, ayuu yidhi.
Marka laga soo tabo wararka siyaasadda iyo dhacdooyinya, waxaa kale oo lagu daabacaa warar ku saabsan arrimaha bulshada, sheekooyinka uu binu’aadamka xiiseeyo iyo waxyaabaha qadiimiga ah ee Caasimadda Asmara.
Dolwadda Eritrea waa dolwadda hal dhinac ah oo aan mucaardka u dulqaadanin, waxaana madaxweyne Isaias Afwerki uu talada dalka qabtay 1993 markii ay ka go’een dalka itoobiya .
‘Dagaalka Dacaayadda ‘
BBC-da uma suur galin in ay xaqiijiso sheegashooyinka eedamahaan iyadoo xirir la sameysay mas’uuliyiinta dowladda balse aanay ka jawaabin.
Xiriirka wanaagsanaaday ee Itoobiya iyo Eretariya ayaa dad badan oo u dhashay Eretariya rajo galiyay waxaana mas’uuliyiinta dolwadda oo wax laga wayadiyay heerka xorriyatul qowlka ay sheegeen in dadku ay ra’yigooda dhiiban karaan.
Previous articleMadaxweyne Mustafe Cagjar Iyo Wafti Uu Hoggaaminayo Goor-dhawayd Soo Gaadhay Somaliland Iyo Ujeedada Safarkooda
Next articleCohen oo ka warbixiyey madaxweyne Trump Qareenkii hore ee madaxweyne Donald Trump, Michael Cohen ayaa maanta guddiga ka tirsan Aqalka Wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay “nin neceb dadka madow, beenlow iyo qaa’in ah”